सप्तरीमा जनता समाजवादी पार्टीको बृहत सभा — Himalisanchar.com
काठमाडौ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीले बुधबार सप्तरीको राजविराजमा बृहत विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद् भंग गरेपछि सोविरुद्ध जसपाले सडक आन्दोलन थालेको थियो । जसपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन र विरोध सभाको कार्यक्रम राखेको थियो ।
विरोध सभा गत पुस २५ गतेदेखि माघ ७ गतेसम्मका लागि तय गरिएको थियो । जसपाको घोषित आन्दोलन अनुरुप अन्तिम दिन बुधबार राजविराजको राजरंगशालामा बृहत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा हजारौ मानिसहरुको सहभागिता थियो । सभालाई जसपाका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले विशेष सम्बोधन गरेका थिए ।
जसपाले बुधबार कैलालीको टीकापुरमा पनि विरोध सभाको आयोजना गरेको छ । जसमा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गरेका छन् । माघ ७ गते देशका सबै जिल्लाको सदरमुकामा प्रदर्शन गर्ने जसपाको घोषणा थियो । बुधबार काठमाडौंको रत्नपार्क पनि जुलुस तथा विरोधसभा गरिएको छ । जसमा जसपाका नेतृ हिसिला यमीले सम्बोधन गरेकी छन् । यो संगै जसपाको दोस्रो चरणको आन्दोलन पुरा भएको छ । जसपाले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
केपी ओलीले देव गुरुङ हटाएर विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त
सरकारले फेरि गर्‍यो ३१ सहसचिवको सरुवा, को कहाँ ?
‘सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्नुपर्छ’ तिलक राई
नेकपाको नामको विवादमा सुनुवाई सकियो सर्वोच्चले फागुन २० गते फैसला सुनाउने